Rivalfox inounganidza data kubva kwakasiyana masosi pane vako vakwikwidzi uye inoita kuti data riwanikwe nyore kubva kune mumwe mukwikwidzi wedhata hub. Zvinyorwa zvinosanganisira traffic, kutsvaga, webhusaiti, tsamba yemapepa, mhizha, zvemagariro uye kunyangwe vanhu uye shanduko yebasa. Rivalfox ndeye SaaS mhinduro inoisa yekucheka-pamucheto kukwikwidzana njere mumaoko ako. Tinotenda kuti nekudzidza kubva kumakwikwi ako, unogona kukura nekukurumidza, kudzivirira zvikanganiso uye kuwana mukana. NaRivalfox, makambani eese saizi anogona